Uto nke Ndị Ahịa Ahịa | Martech Zone
Uto nke ndi ahia ndi ahia
Thursday, July 5, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Mgbe anyị na ụlọ ọrụ buru ibu na-agba izu ị chọrọ ịbanye na mgbasa ozi mmekọrịta, usoro izizi nke ajụjụ anyị na-ajụ ha gbasara akụrụngwa ndị ahịa ha. Ọ bụ ezie na ndị ahịa na-ele anya na mgbasa ozi mmekọrịta iji bulie ozi ha n'ịntanetị, ndị ahịa nke ụlọ ọrụ ndị ahụ na-atụ anya na ọ bụ usoro ọhụụ ebe ha chọrọ nzaghachi.
site Bluewolf: Companieslọ ọrụ na-eche echiche n'ihu na-etinye ego na ngwaọrụ ndị na-enye ọ bụghị naanị ndị ọrụ ahịa ha, mana ndị ọrụ ha niile, na asọmpi asọmpi. Nweta akụrụngwa nke kọwaa etu ịkwaga oche ọrụ gị na igwe ojii, ma kwado ya na ọdịbendị ndị ahịa lekwasịrị anya, nwere ike inyere gị aka ịsọ mpi ma merie.
Nke a bụ nnukwu ozi ederede sitere na Bluewolf nke na-enye nghọta banyere uto nke ụlọ ọrụ ndị na-elekọta mmadụ:
Ma lee nkọwa otu Bluewolf nwere ike isi nyere azụmahịa gị aka:
Gbalia ibudata Bluewolf's Social Ọrụ Kitga nke Ọma Kit!
Tags: blọwNdị ọrụ nlekọta ndị ahịainfographicọrụ ndị ahịa
Inbound Marketing na-ebili
Kedu ka Klout si arụ ọrụ?